Guddoomiyaha Bankiga Dhexe : Dowladda FS iyo Dowlad Goboleedyada waa in ay wax ka qabtaan lacagaha been abuurka ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Bankiga Dhexe : Dowladda FS iyo Dowlad Goboleedyada waa in ay...
Guddoomiyaha Bankiga Dhexe : Dowladda FS iyo Dowlad Goboleedyada waa in ay wax ka qabtaan lacagaha been abuurka ah
Kadib shir jaraa’d uu maanta ku qabtay xafiiskiisa,Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Mudane Bashiir Ciise Cali ayaa wuxuu kaga hadlay dhibaatooyinka ka dhashey lacago been abuur ah oo la soo geliyay qaar kamid ah suuqyada dalka.
Wuxuu ka dalbaday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedyada in ay ku dadaalaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen lacagaasi oo been abuurka ah.
Mudane Bashiir Ciise Cali ayaa dhanka kale sheegey in uu socdo qorshe ku aadan sidii lacago cusub oo shillin Soomaali ah loo soo daabici lahaa si looga gudbo dhibaatooyinka ka taagan dhanka lacagaha shillionka ah.
Hadalka ka soo baxay guddoomiyaha ayaa imaanaya xili muddooyinkii ugu dambeeyey suuqyada qaar kamid ah magaalooyinka gobolada dalka lagu arkayay lacago been abuur ah kuwaasi oo saameeyey nolosha bulshada.
Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa kamid ah meelaha ay dhibaatooyinkaasi ay ka tagnaayeen ayadoo maamulka iyo ganacsatadu ay ka shireen sidii xal looga gaari lahaa arrintaasi, oo saameyn xoogan ay ku yeelatay nolosha dadka.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha oo ku booriyay shaqaalaha rayidka ee dowladda inay gutaan waajibaadka loo idmaday
Next articleXog-hayaha Guud ee QM oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomay safiirka Soomaaliya ee QM